ဘယ်သူတွေ အော်စကာဆု ရမလဲ
| သောကြာနေ့၊ မတ်လ ၀၅ ရက် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ၁၉ နာရီ ၂၂ မိနစ်
အမေရိကန် ရုပ်ရှင် ဝိဇ္ဇာနှင့် သိပ္ပံအသင်းကြီးက ကြီးမှူးပြီး မတ်လ ၇ ရက်နေ့ ညနေမှာ ကာလီဖိုးနီးယားပြည်နယ် လော့စ်အိန်ဂျလိစ်မြို့ ဘီဗာလီဟေးခရိုင် ဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်မြို့တော်က ကိုဒတ် ဇာတ်သဘင်ခန်းမကြီးမှာ အော်စကာလို့ လူသိများတဲ့ အမေရိကန် ရုပ်ရှင် ထူးချွန်ဆုတွေကို ပေးအပ်ချီးမြှင့်တော့မှာပါ။
ဆုရရှိတဲ့သူတွေကို ချီးမြှင့်မယ့် အော်စကာ ရွှေစင်ရုပ်တုကလေးဟာ အလေးချိန် ၈.၅ ပေါင် လေးပါတယ်။ အော်စကာဆုဟာ ခရူးဆိတ် စစ်ပွဲတွေမှာ သုံးတဲ့ ဓားရှည်ကို ကိုင်ဆောင်ထားတဲ့ စစ်သည်တော်ပုံစံ ရုပ်တုလေးပါ။
ဒီဆုကို ဆုရရှိသူကသာ ပိုင်ဆိုင်ခွင့် ရှိပြီး ဒီဆုရဖို့အတွက် သတ်မှတ်ထားတဲ့ အနုပညာ အရည်အချင်းတခုပဲ လိုပါတယ်။ ဆိုလိုတာက အော်စကာဆုရှင်တယောက်ရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ဘဝနဲ့ အကျင့်စရိုက်တွေကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားလေ့ မရှိပါဘူး။
၁၉၅၅ ခုနှစ်မှာ အော်စကာဆု ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ လူကြီးနဲ့ မက်ထရို ဂိုဒွင် မေယာက အနုပညာ ဒါရိုက်တာ တယောက်ဖြစ်တဲ့ ဆီဒရစ် ဂစ်ဘွန်က “ရုပ်ရှင်ပညာရပ်မှာ သူမတူတဲ့ လူတွေ များများ ပေါ်ထွက်လာဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး ဒီ ဆုပေးပွဲ ကျင်းပတာပါ။ လိုချင်တာက သူ့ရဲ့ ရုပ်ရှင် အနုပညာ အရည်အသွေးပဲ။ အဲဒီမှာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်နေတာကိုပဲ ကြည့်တာ“ လို့ အော်စကာဆုရှင်တွေမှာ ရှိသင့်တဲ့ စံနှုန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စည်းမျဉ်းရေးဆွဲရာမှာ သူက ထည့်သွင်းခဲ့ပါတယ်။
အော်စကာဆုကို ဘယ်တုန်းက စပေးသလဲ?
ရုပ်ရှင် ထူးချွန်ဆု အော်စကာဆု ပေးအပ်ဖို့ စတင်စဉ်းစားခဲ့သူကတော့ အသံတိတ်ခေတ်က ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ ဝီလျံ စီ ဒီမီလီ နဲ့ မင်းသား ဒေါက် ဂလစ် ဖဲယာ ဘန့် အပါအဝင် ရုပ်ရှင်နယ်ထဲက ပုဂ္ဂိုလ် ၃၆ ဦးနဲ့ ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်း အကျိုးဆောင် ရှေ့နေတဦးတို့ ဖြစ်ပါတယ်။
အော်စကာဆုပေးပွဲ အခမ်းအနားကို ၁၉၂၉ ခုနှစ် မေလ ၁၆ ရက်နေ့ ကြာသပတေးနေ့မှာ စတင်ချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၂၉ ခုနှစ် အမေရိကန် စီးပွားရေးပျက်ကပ်ကြီး စတင်နေစဉ်မှာ ဒီဆုကို ပေးအပ်ချီးမြှင့်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဦးနု ဘီအေဘွဲ့ကို ရရှိတဲ့ အချိန်ဖြစ်ပြီး ပဲခူးငလျင်ကြီး မလှုပ်ခင် တနှစ်အလို ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီနှစ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံက ဦးဘကလေးရဲ့ ဝေလွင်လွင်နဲ့ ကြင်ဦးစ ဇာတ်ကားတွေကို ရုံတင်ပြသနေတဲ့ အချိန်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာ့ရုပ်ရှင်က မေတ္တာနဲ့ သူရာက စပြီးရေတွက်ရင် ၁ဝ နှစ် ဝန်းကျင်ထဲကို ရောက်နေတဲ့ အချိန် ဖြစ်ပါတယ်။
အော်စကာဆုကို စတင်ပေးအပ်စဉ်က ဆုအမျိုးအစား ၁၃ ဆုပဲ ပေးအပ်ချီးမြှင့်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံး အကောင်းဆုံး ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဆုကို ဆုပေးဖို့ ၃ ကား ရွေးချယ်ထားတဲ့ အနက်က Wings ဆိုတဲ့ အသံတိတ် ဇာတ်ကားက ရရှိသွားပါတယ်။ ပထမအကြိမ် စတင်ပေးအပ်စဉ်က အကောင်းဆုံး ဇာတ်ကားဆုအတွက် ကဏ္ဍ ၂ ခု လုပ်ထားပြီး Best Picture, Unique and Artistic Production နဲ့ Best Picture Production ဆိုပြီး ပေးတာပါ။ ဟာသမင်းသားကြီး ချာလီ ချက်ပလင်က အဲဒီနှစ်မှာပဲ ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆုကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။
စတင်ပြီး ဆုပေးအပ်ချီးမြှင့်စဉ်ကတည်းက Best Effect ၊ Engineering Effect ဆိုပြီး အထူးပြုလုပ်ချက်ဆုကို ထည့်သွင်းချီးမြှင့်ခဲ့တာဟာ ဟောလိဝုဒ် ရုပ်ရှင်ကားတွေကို အကောင်းဆုံး တီထွင်ဖန်တီးနိုင်စေဖို့ ဖြစ်လာပါတယ်။ ပထမဆုံး ပေးအပ်စဉ်က ဆုရရှိခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကား အားလုံးဟာ အသံတိတ် ဇာတ်ကားတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၂ဝဝ၉ ခုနှစ်က ကျင်းပခဲ့တဲ့ အော်စကာဆုပေးပွဲမှာတော့ ဆုအမျိုးအစားပေါင်း ၂၄ မျိုး ပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။ ဆုအမျိုးအစားတွေကတော့ အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အတိုင်းပါ။
Best Picture, Director, Actor, Actress, Supporting Actor, Supporting Actress, Original Screenplay, Adapted Screenplay, Editing, Cinematography, Art Direction, Costume Design, Sound Editing, Sound Mixing, Score, Visual Effects, Makeup, Song, Foreign Language Film, Animated Feature Film, Short Film, Animated Short, Documentary and Documentary Short.
နိုင်ငံခြား ဘာသာစကားပြော ဇာတ်ကားများနဲ့ ဟောလိဝုဒ်
နိုင်ငံခြား တိုင်းပြည်တွေကနေ ထုတ်လုပ်တဲ့ နိုင်ငံခြား ဘာသာစကားနဲ့ ပြောတဲ့ ဇာတ်ကားတွေကို ၁၉၅၇ ခုနှစ်မှာ ကျင်းပတဲ့ ၂၉ ကြိမ်မြောက် အော်စကာ ဆုပေးပွဲကနေ စတင်ပြီး ဆုကို စတင် ပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။ ပထမဆုံး ချီးမြှင့်တဲ့ နိုင်ငံခြား ဘာသာစကားပြော ဆုပေးပွဲမှာ ပထမဦးဆုံး ဆုရရှိခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားကတော့ မက္ကဆီကန် မင်းသားကြီး အန်ထော်နီကွင်း ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ အီတာလျံ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား La Strda ဖြစ်ပါတယ်။
သတင်း မှတ်တမ်း ရုပ်ရှင်ကားများကို စတင်ပေးအပ်ခြင်း
ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်မဖြစ်ခင် ၁၉၄ဝ ခုနှစ်မှာ အော်စကာဆု ရွေးချယ်ရေး အဖွဲ့ဝင် ဂျူရီလူကြီးတွေဟာ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားတွေကို အကယ်ဒမီ ဆုပေးပွဲမှာ ကဏ္ဍတခု ထည့်သွင်းပြီး ဆုပေးဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်က အမေရန်ကန်နိုင်ငံမှာ စစ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သတင်းမှတ်တမ်း ရုပ်ရှင်ကားတွေ ရိုက်ကူးမှု ရှိလာပြီး ဥရောပမှာတော့ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင် ရိုက်ကူးမှုက ပိုမိုတွင်ကျယ်နေပါပြီ။ ဂျာမန် အာဏာရှင် ဟစ်တလာဟာ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားတွေ နှစ်သက်သူဖြစ်ပြီး သူ့လက်ထက် ဂျာမဏီနဲ့ ဥရောပ နိုင်ငံအချို့မှာ ရုပ်ရှင်ရုံပေါင်း ၅ဝဝ ကျော် (နာဇီတပ်ထဲတွင် ၃ဝဝ ကျော်) တည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ် (Inglorious Bustards ) ဇာတ်ကားတွင် ရှု။ ဤကား စကားချပ်။
၉ဝ ပြည့်နှစ် မတိုင်ခင်က မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကားတွေကို ဆုပေးဖို့ ရွေးချယ်ရာမှာ ရသကဲပြီး တင်ပြနိုင်တဲ့ ဇာတ်ကားတွေကို ဆုရွေးချယ်ဖို့ ချီးမြှင့်ခဲ့ပေမယ့် ၁၉၉ဝ ပြည့်နှစ် နောက်ပိုင်းမှာတော့ အမေရိကန် အစိုးရကို သရော်ထားတဲ့ ဇာတ်ကားတွေနဲ့ ကမ္ဘာမှာ လတ်တလော ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို သရုပ်ဖော်ထားတဲ့ ဇာတ်ကားတွေက ဆုရွေးချယ်ခံလာရပါတယ်။ ဥပမာ - American Dream, Bowling for Columbine, Taxi to Dark side နဲ့ The Fog of War ဇာတ်ကားတွေ ဆုချီးမြှင့်ခံခဲ့ရပါတယ်။
၈၂ ကြိမ်မြောက် ကျင်းပတဲ့ အော်စကာဆုပေးပွဲမှာ ၂ဝဝ၇ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံက ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေးအတွင်း ဆန္ဒပြသူတွေကို အာဏာပိုင်တွေက ရက်ရက်စက်စက် နှိပ်ကွပ်ပုံကို ဗီဒီယို မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ လျှို့ဝှက်သတင်းထောက် တယောက်ရဲ့ ဘဝနဲ့ လူထုအုံကြွမှုအကြောင်း မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ Burma VJ သတင်းမှတ်တမ်း ရုပ်ရှင်ကားလည်း အကောင်းဆုံး မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကားအဖြစ် ချီးမြှင့်ဖို့ ပဏာမ ရွေးချယ်ခံထားရပါတယ်။
အခုနှစ် ကျင်းပမယ့် အော်စကာဆုပေးပွဲမှာ ထူးခြားချက်ကတော့ အကောင်းဆုံး ဇာတ်ကားဆု ပေးဖို့အတွက် အရင်ကလို ဇာတ်ကား ၅ ကားထဲကနေ ဆန်ကာတင် ရွေးချယ်တာ မဟုတ်ဘဲ ဇာတ်ကား ၁ဝ ကားကနေ ရွေးချယ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနှစ် ဆုပေးပွဲမှာ ကမ္ဘာ့ဝင်ငွေ အကောင်းဆုံး ရုပ်ရှင်အဖြစ် စံချိန်ချိုးခဲ့တဲ့ ဒါရိုက်တာ ဂျိမ်းစ်ကင်မရွန်ရဲ့ Avatar ဇာတ်ကားကလည်း ဆုလျာထားခံရသလို သူ့ရဲ့ ဇနီးဟောင်း ကက်သရင်း ဘီဂယ်လို ရိုက်ကူးတဲ့ The Hurt locker ဇာတ်ကားကလည်း လျာထားခြင်း ခံရပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားဟာ အီရတ်ရောက် အမေရိကန် စစ်တပ် ဗုံးရှင်းလင်းရေး တပ်ဖွဲ့အကြောင်းကို ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားတာပါ။
ဒီနှစ် အကောင်းဆုံး ဇာတ်ကားဆု ရွေးချယ်ခံရတဲ့ ဇာတ်ကားတွေက Avatar, The Blind Side, District 9, An Education, The Hurt Locker, Inglourious Basterds, Precious: Based on the Novel "Push" by Sapphire, A Serious Man, Up in the Air ဇာတ်ကားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ရေးသူ စိတ်ကြိုက် ဇာတ်ကားများမှာ An Education, The Hurt Locker, Up in the Air, Inglorious Basterds တို့ ဖြစ်ပါတယ်။